IPerch eBryce Hill Condos, 1BR/1BA
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguRoy
Indawo epholileyo yokuphumla intloko yakho kwaye uphumle ngexesha lokubaleka kwesibini sakho esilandelayo! Ukuhamba umgama ukuya eLake Laura, ibhedi enye, indawo yokuhlambela enye inika ukufikelela ekunyukeni intaba, ukuqubha, ukukhwela ibhodi, kunye ne-kayaking. I-Bryce Resort ibonelela ngemisebenzi yaminyaka yonke efana nokutyibiliza ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibiliza emkhenkceni, ukudlala igalufa, ukuqubha, intenetya, ukukhwela ibhayisekile entabeni, kunye nelinen eziphu. Ihlathi leSizwe laseGeorge Washington, iindawo zokuthengisa iwayini, iindawo ezithengisa utywala, iifama zasekhaya kunye nezinye izinto ezininzi ezizezinye zikufuphi!
Le yunithi yekona ibandakanya igumbi lokulala elinye kunye nebhedi yokumkanikazi. Kwakhona sigcina umatrasi womoya ukumkanikazi esandleni, ukuba ungathanda ukulala iindwendwe ezi-4-5 ngeveki usebenzisa i-air mattress kunye ne-sofa (hayi isofa yokulala). Kukho izinto zokulala ezongezelelweyo ezifumanekayo zomoya umatrasi. Qaphela: kukho umrhumo we-$25 wondwendwe ngalunye ngaphezu kwabantu aba-2.
I-condo incinci, kodwa indawo yangaphandle kunye nobuninzi bokukhanya kwendalo kunika imvakalelo evulekileyo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo likulungele ukulungiselela ukutya ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho iiTV kwindawo yokuhlala kunye negumbi lokulala, kunye neYouTubeTV kunye nee -apps zokusasaza ukuze ukonwabele. Idesika ibonelela ngendawo efanelekileyo yokuphumla, ukubukela iintaka, okanye ukonwabela iwayini oyicholayo kwiindawo zewayini zasekhaya.
Kukho indawo yokuhlamba impahla ngokuthe ngqo ezantsi kweyunithi eneewasha kunye nezomisi. Akukho yunithi yokuhlamba kunye nesomisi.
Sigcina ikofu, iti, i-creamer, kunye ne-sweeteners esandleni ukulungiselela iindwendwe.
Iyunithi inobubele kwisilwanyana sasekhaya (2 ubuninzi besilwanyana sasekhaya), kodwa siyacela iindwendwe ukuba zigcine izilwanyana zasekhaya kwifanitshala. Izinja zivumelekile kwiindlela ezininzi ezikufutshane, kubandakanywa umzila wechibi phakathi komgama wokuhamba. Kukwakho nepaki yezinja ekufutshane. Qaphela: kukho umrhumo wexesha elinye we-$25 yesilwanyana sasekhaya.
25% isaphulelo kubhukisho ngeveki kunye 45% isaphulelo ukubhukisha ngenyanga.
I-Bryce Hill Condos ibekwe ekupheleni kweLake Laura, kufutshane nedama. Ii-condos kukuhamba okufutshane ukuya edameni kwaye kukhokelela kwiLake Loop, umzila oya kukuthwala ujikeleze umda wechibi. Ii-condos zisebenza kakhulu ngeempelaveki, njengoko abantu besuka kufutshane ukuya kuchitha ixesha eBasye kwimisebenzi yonyaka wonke.
Ndijonge ukusabela kunye nokwamkela iindwendwe ukuze ndikunike impelaveki emnandi kude! Ndijonge ukufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndifuna ukuva kwiindwendwe zethu ukunika iindwendwe ezizayo indawo engcono yokuhlala.
Ndijonge ukusabela kunye nokwamkela iindwendwe ukuze ndikunike impelaveki emnandi kude! Ndijonge ukufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndifuna ukuva…